မိမိဆန္ဒအလျောက် ထိုင်းနိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းများမှ နေရပ်ပြန်ခဲ့ကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၅ဝကျော် မြဝတီမြို့၌ တာဝန်ရှိသူများကြိုဆို - Yangon Media Group
မိမိဆန္ဒအလျောက် ထိုင်းနိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းများမှ နေရပ်ပြန်ခဲ့ကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၅ဝကျော် မြဝတီမြို့၌ တာဝန်ရှိသူများကြိုဆို
ထိုင်းနိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းများမှ နေရပ်ပြန်ခဲ့ကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအားတွေ့ရစဉ်။
မြဝတီ၊ ဇူလိုင် ၁ – စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် မိမိဆန္ဒအလျောက် ထိုင်းနိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းများမှ နေရပ်ပြန်ခဲ့ကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံ သား ၁၅ဝကျော်ကို ဇူလိုင် ၁ ရက် ညနေ ၄ နာရီခွဲက မြန်မာ – ထိုင်း နယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့ အမှတ် (၄)ရပ်ကွက်ရှိ ပြန်လည် ကြိုဆိုရေးစခန်း၌ တာဝန်ရှိသူများ က ပြန်လည်လက်ခံကြိုဆိုခဲ့ကြ ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ပြန်လည်လက်ခံကြိုဆိုပွဲတွင်က ရင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးမင်း နောင်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်းက ပြန်လည် ဝင်ရောက် လာကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့်ပတ်သက် ၍ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
”အခုလို မိမိသဘောဆန္ဒနဲ့ နေရပ်ပြန်လာကြတာဟာ စတုတ္ထ အကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြန်လာ သူတွေက စုစုပေါင်း ၁၅၇ ဦးရှိပြီး အိမ်ထောင်စု ၃၉ စုရှိပါတယ်။ ပထမအကြိမ် ၇၁ ဦး၊ ဒုတိယအ ကြိမ်က ၉၃ ဦး၊ တတိယအကြိမ်က ၅၆၇ ဦးနဲ့ အခုစတုတ္ထအကြိမ်မှာ ၁၅၇ ဦးပြန်လာကြတာပါ။ ထိုင်း နိုင်ငံ ဒုက္ခသည်စခန်းကိုးခုမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက် ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ နေရပ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာ သူတို့နေထိုင်မယ့်ဒေသကို သက်ဆိုင် ရာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး အခမဲ့ ပြန်ပို့ပေးမှာဖြစ်သလို အလုပ် အကိုင်များရရှိစေဖို့နဲ့ မှတ်ပုံတင် တွေရရှိစေဖို့ကိုလည်း အခမဲ့ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်း က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါနေရပ်ပြန်မြန်မာနိုင်ငံ သားများအား ဘေးအန္တရာယ် ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှ စောင်၊ ခြင်ထောင်၊ အဝတ်အ ထည်နှင့် အိုးခွက်ပန်းကန်များအပြင် အိမ် ထောင်စုတစ်စုလျှင် လူတစ်ဦးရှိပါက ငွေတစ်သိန်း၊ လူနှစ်ဦးရှိပါက ငွေကျပ်နှစ်သိန်းနှင့်် လူသုံးဦးနှင့် အထက်ဆိုပါက ငွေကျပ်သုံးသိန်း စီထောက်ပံ့ပေးပြီး တစ်လစာဆန်နှင့် ဆီများကိုပါ ထောက်ပံ့ပေးသည်။
”ကျွန်တော်က ဘုရားသုံးဆူ ပြန်မှာပါ။ ထိုင်းနို့ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်း မှာ ရှစ်နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တတိယနိုင်ငံ ကိုသွားဖို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုအဆင် မပြေတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် မိမိသဘောနဲ့ပြန်လာပြီး ကိုယ့်အရပ် ဒေသမှာရရာအလုပ်ပဲလုပ်ဖို့ပြန်လာ ခဲ့တယ်”ဟု ဘုရားသုံးဆူမှ ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ပုဂံကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်၊မဝင်ဆုံးဖြတ်ပေးမည့်ညီလာခံသို့ အေးဝတ်ရည်သောင်းနှင့် အယ်လ်နောင်းတို့အပါအဝင် နှလုံးသားထဲကပုဂံအဖွဲ့သားများပါ လိုက်ပါတက်ရောက်မည်
တိုင်းရင်းသားပူးပေါင်းပါတီများ ဇူလိုင်လလယ်တွင် ရန်ကုန်၌တွေ့မည်
သုံးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုဖြစ်ပွားရာ တိုက်ခန်းကို ထောင်မှ လွတ်လာသော အသတ်ခံရသူ၏ ခင်ပွန်းထံြ??
လှိုင်သာယာ ထိန်ပင် အမှိုက်ပုံ မီးလောင်မှု ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်း ထိန်းနိုင်၊ မီးခိုးများကို Bio Foam သုံြး?
မိမိကို အမှန်တကယ် အလိုရှိခဲ့သော နည်းပြကွန်တီက အရေးပါခဲ့ကြောင်း ဂီရော့ဒ် ဖွင့်ဟ